Vaovao - Fitsipika marobe momba ny safidy mialoha mahery setra
Fitsipika marobe amin'ny fisafidianana abrasive savaranonando
Ny harafesin'ny vy dia hita hatraiza hatraiza, amin'ny fotoana rehetra
Mba hisorohana ny harafesin'ny vy, ny fomba mahazatra indrindra dia ny fampiasana palitao hiarovana ny ambonin'ny vokatra vy. Ny tany dia tsy maintsy diovina alohan'ny fiarovana. Vokatra sy indostria an-jatony ao anatin'izany ny sambo, tanky fitehirizana, tetezana, rafitra vy, tobin-herinaratra, fiara, lokomotiva, fitaovam-piadiana, fitaovana aerospace, sns. Ny metaly abrasive no fitaovana fanadiovana mahomby indrindra.
Amin'ny ankapobeny, misy tifitra vy (tifitra vy mahery SY tifitra vy ambany karbaona), vy grit, vy voatifitra, vy grit, tariby notapahana vy tsy misy fangarony / voatifitra, grit vy, tariby tapaka vy, mitondra grit vy, sns. Ny abrasives metaly avo lenta dia tsy mora vaky, vovoka ambany, fanjifana ambany, fahombiazan'ny fanadiovana avo lenta ary fampisehoana vokatra tsara amin'ny ankapobeny. Izy io dia afaka mampihena be ny haavon'ny mpanjifa farany, hampihena ny vidiny ary hampihena ny entona.
Ka ny fanontaniana dia hoe, ahoana ny fisafidianana abrasives vy avo lenta?
Mba hahazoana antoka fa ny valin'ny fitsaboana ambonin'ny tany dia mahatratra hatrany amin'ny fenitra, ireo mari-pamantarana roa lehibe amin'ny famonoana vy: ny fahombiazan'ny fanadiovana sy ny fanjifana.
Tsy fifankahazoan-kevitra maromaro amin'ny fisafidianana tifitra vy:
Tsara kokoa ve ilay vy voatifitra?
Mbola mitovy ve ny haben'ny sombina, no tsara kokoa?
Ny mamiratra ny endrika ivelany, ny tsara kokoa?
Amin'ny dingan'ny famolavolana sy fanomanana tifitra vy, ny vy anidina dia ampangatsiahina avy amin'ny ranoka ka hatramin'ny mafy, ary mihena mandritra ny fizotran'ny fanamainana. Ity fihenam-bidy ity dia tanterahina amin'ny fanjakana malalaka, ary tsy misy riser toy ny fandatsahana casting amin'ny ampahany ampiarahina amin'ny vy anidina izay mihena ny habetsaky ny fihenan-tsofina, noho izany dia mipoitra ireo sombin-kazo elliptika miaraka amin'ny faritra nalentika. Ity karazana poti-javatra ity dia nihena kely, ary ny endrika tsy boribory fa matevina ny firafiny. Na izany aza, raha ny tifitra vy izay mbola tsy nifanarahana tanteraka, tsy matevina ny firafiny, misy lesoka anatiny toy ny fihenan-doha-pôrimika ary lava-pitombenana.
Manary angovo E = 1 / 2mv2, raha matevina ny firafiny, miaraka amin'ny habetsany mitovy, ny kalitaon'ny M lehibe dia lehibe kokoa, ny angovo misy vokany lehibe kokoa, ary tsy mora tapaka ihany koa. Amin'ity fomba ity, tsy marina izany: ny vy boribory nitifitra ny tsara kokoa.
Mbola mitovy ve ny haben'ny voam-by, no tsara kokoa?
Eo amin'ny sehatry ny fanadiovana dia hamorona lavaka amin'ilay faritra nodiovina ny velaran'ilay zavatra diovina na famafazana. Rehefa mifanindry tanteraka ny lavaka sy ny lavaka, dia afaka diovina tsara ny faritra manontolo.
Arakaraka ny haben'ny fanamiana ny haben'ny sombin'ilay tifitra vy, dia vao mainka ilaina ny mihabe ny lavaka amin'ny lavaka. Ho an'ny tifitra vy miaraka amin'ny haben'ny fampifangaroana ny sombintsombiny, ny tifitra vy lehibe ampiasaina amin'ny fanadiovana ary ny tifitra vy kely hanadio ny elanelan-tany eo anelanelan'ilay faritra tsaboin'ny tifitra vy lehibe
Amin'izao fotoana izao dia misy karazany roa ny tifitra vy mahery: tifitra vy famonoana tokana ary tifitra vy famonoana indroa. Sarotra ny manavaka ny firafitra, ny hamafiny ary ny rafitra metallographic. Na izany aza, ny tifitra vy maty roa hena dia manana voamadinika tsara sy fiainana mandreraka be, Ny voan'ny vy nitifitra tokana dia maditra ary ambany ny fiainana havizanana. Ny tifitra vy famonoana tokana dia tsy namboarina niaraka tamin'ny fanamainana sy famonoana, ny horonan-tsarimihetsika Fe3O4 oxide niforona tamin'ny manify ny tampony, mamirapiratra be ny endriny; raha nitifitra kosa ny vy taorian'ny fitsaboana famonoana faharoa, ny sarimihetsika Fe3O4 ambonimbony lasa matevina kokoa, tsy taratry ny hazavana ary tsy dia mamirapiratra. Ka ny velaran-tarehy mamiratra dia tsy mamoaka ny vokatra tsara kokoa, fa raha tifitra vy roa na voatifitra kosa no olana lehibe kokoa.